Musiki we 'Varindi' Alan Moore's 'Iyo Show' ndeye yakazara Mindbender uye Inotungamirirwa kuBlu-Ray - iHorror
musha Blu Mwaranzi Musiki we 'Varindi' Alan Moore's 'Iyo Show' ndeye yakazara Mindbender uye Inotungamirwa kuBlu-Ray
Musiki we 'Varindi' Alan Moore's 'Iyo Show' ndeye yakazara Mindbender uye Inotungamirwa kuBlu-Ray
Iwe Wanga Unesu Kwatiri Alan Moore
by Trey Hilburn III September 13, 2021 337 maonero
Varindi ndeimwe yemanyorero akajeka kwazvo emifananidzo akambonyorwa. Ivo hwakakwana hunyanzvi. Aya anotevera mabhuku anotungamira kuHBO's Varindi dzakateedzana dzaive nyanzvi mukuhwina kwavo chaiko nenzira inenge yapfuura yakatora zvemukati zvirimo. Zvino, shasha yenguva yedu, Alan Moore ane firimu idzva munzira inonzi, The Show. Imwe yekutarisa iyi teaser uye iwe unenge uri mubhodhi pamwe neakanyanya kusanzwisisika neon yakavhenekerwa nyika iyo yakamirira.
Mutsara we The Show inoenda seizvi:
Fletcher Dennis (Burke), murume ane matarenda mazhinji, mapasipoti uye kuzivikanwa, anosvika kuNorthampton - dhorobha risingazivikanwe uye rakashama mumoyo weEngland rine njodzi sezvaari. Pane chinangwa chekutsvaga chakabiwa chigadzirwa chemunhu anotyisidzira mutengi, Fletcher anozviwana azvipotera munyika yerubvunzavaeni yakazara nevampires, vakanaka vakarara, zvikwata zveVoodoo, maziso emunhu oga, uye vatsiva vakafukidza. Iye anokurumidza kunyura mugomba dema risinganzwisisike uye rakajeka, rakavanzwa pasi pechiso cheguta rinoita serakanyarara. Munguva pfupi yakwana Fletcher anowana kuti zviroto uye chokwadi zvadzikiswa uye pangave pasisina nyika chaiye yekudzokera ku… Welcome to The Show.
Mitch Jenkins akatungamirirwa The Show iri rimwe risinganzwisisike. Yakazara nerutivi rwaMoren rwevatorwa, uye ndeimwe yemafirimu anokumbira kuti uonekwe kashoma.
Iwo akakosha maficha e Iyo Show yacho kuuya blu-ray kunosanganisira tirera, "Show Pieces original short film" uye "Welcome to The Show featurette," iyo inosanganisira hurukuro dzakasarudzika naAlan Moore naMitch Jenkins.
The Show inouya ku-blu-ray kutanga Mbudzi 23 uye padhijitari uye Pakudiwa kutanga Gumiguru 5.
Iwe uri fan yaAlan Moore here? Tiudzei muchikamu chemashoko.